Mpanamboatra sy mpamatsy lamba tsy tenona Meltblown | Rayson
Lamba tsy voatenona tsy voatenona dia vita amin'ny teknika manokana amin'ny famokarana lamba tsy tenona misy kofehy tena tsara. Ny lamba tsy voatenona voadonika dia singa iray manandanja amin'ny fanaovana sarontava tarehy izay miaro ireo mpiasan'ny fitsaboana amin'ny coronavirus vaovao. Ity lamba sivana voadonika ity dia ampahany lehibe amin'ny respirator izay afaka manome ny ankamaroan'ny fiarovana. Izy io dia azo ampiasaina be dia be amin'ny respirator azo ovaina, saron-tava fandidiana, saron-tava, respirator vovoka ampiasaina indray, ary respiratory fandidiana. Rehefa miparitaka erak'izao tontolo izao ny viriosy dia tsy ampy ny saron-tava.
Meltblown tsy lamba vita amin'ny lamba 25gr ho an'ny saron-tava
Inona no atao hoe lamba vita amin'ny vy vita?Meltblown Non woven lamba dia vita amin'ny teknika manokana ho an'ny fanamboarana lamba tsy misy paompy misy fibra tsara. Meltblown Non Wovern Wevric no ampahany lehibe amin'ny saron-tava izay afaka manome ny ankamaroan'ny fiarovana. Ny lamba tsy nofon-doha ho an'ny saron-tava dia manana fiasa Electrostatic Adsorption izay afaka mihazona ny bakteria. Rayson dia mpanamboatra lamba vita amin'ny lamba, manome lamba tsy misy lamba tsy misy lamba 25gr ho an'ny saron-tava 25gr ho an'ny saron-tava.
Meltblown Non woven lamba
Ny lamba tsy voaroy dia vita amin'ny teknika manokana ho an'ny fanamboarana lamba tsy misy fako miaraka amin'ny fibra tsara dia afaka manome ny tsaramaso tsy mitovy amin'ny vokatra samihafa, indrindra ny 20g / GSM-150g / GSM. BFO 99% Melt-Blown dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana saron-doha, saron-tava fandidiana, ary mivarotra tsara sy malaza amin'ny sehatry ny indostria samihafa. Ny microfibers dia manome faritra avo lenta ho an'ny insulation tsara sy ny fanemorana ny toetra mampiavaka.Face vy vita amin'ny bfe99% miloko vita amin'ny bakteria. Manalavitra ny fiantrana eo amin'ny olona sy ny fiparitahan'ny bakteria isan-karazany amin'ny vanim-potoana samihafa. Izy io dia afaka manakana ny allergy allergy ihany koa ary hampihena ny fahavoazana zavatra manimba amin'ny vatan'olombelona. Ny mpitsabo, ny mpitsabo ary ny mpiasan'ny mpitsabo hafa dia ankasitrahan'ny mpiasam-pitsaboana hafa.
Adsorption Electrostatic Meltlblown tsy lamba vita amin'ny lamba 25gr ho an'ny saron-tava
Meltblown Non wovric dia vita amin'ny teknika manokana ho an'ny fanamboarana lamba tsy misy lamba miaraka amin'ny fibre tsara tsara. Ny ampahany lehibe amin'ny saron-tava izay afaka manome ny ankamaroan'ny fiarovana. Ny endri-javatra ny doka elektrika dia mitazona ny bakteria.